Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Oo Shir Kaga Qaybgelaya Wadanka Turkiga.
January 11, 2018 - Written by Kulmiye
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Mohammed Guleed (Khadar) iyo wefti uu hogaaminaayo ayaa gaaray magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Wafdiga Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha magaalada Ankara ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan dalka Turkiga, Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi iyo xubno kale.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ayaa wafdigiisa waxaa ka mid ah Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo uu ugu horeeyo Wasiirka Cusub ee Ganacsiga iyo Warshadaha Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye), Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo masuuliyiin kale.
Mudane Mahdi Mohammed Guleed (Khadar) Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka iyo wafdigiisa ayaa waxa ay Magaalada Ankara uga qeyb galayaan Shirka Iskaashiga Ganacsiga Soomaaliya iyo Turkey-ga oo markii ugu horreysay ka dhacaya dalka Turkey.
Shirkan ayaa marka uu soo idlaado waxa uu qorshaha yahay in Ra’iisul Wasaare ku xigeenka la kulmo Madax ka tirsan dalka Turkiga iyo Ardada dalkaasi wax ka barata iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan Turkiga.